सा’व’धान ! झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् – List Khabar
Home / रोचक / सा’व’धान ! झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्
सा’व’धान ! झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्
admin4weeks ago रोचक Leaveacomment 111 Views
अचेल मानिसहरू सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्’तारसँगै मानिसहरूमा यो लत बसेको हो । त्यति मात्र नभएर उनीहरू मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरूबाट लेखेर तथा भ्वाइ’समार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् ।
यसबाट उ’नीहरूले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्न सक्ने जो’खि’मबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक-पटक एउटै कुरा धेरै सर्च गर्ने मानिसहरूलाई अ.नुसन्धान एजेन्सीहरूले म’निटर गरिरहेका हुन्छन् ।
एक दुई पटक बे’वास्ता गर्न सक्छ तर पटक–पटक सर्च गर्नाले तपाईँलाई प्र’हरीले प’क्राउ समेत गर्न सक्छ । केही सर्च गर्न नहुने कुराहरू छन् जुन गु’गलमा खोज्नुभन्दा सम्बन्धित साइट नै खोलेर हेर्न इन्टरनेट सुरक्षा विदहरुले सु’झाव दिएका छन् ।जसका विषयमा जानकारी यहाँ दिइएको छ ।
१.चाइल्ड पो’ ’र्न :
पो’ र्नलाई लिएर पछिल्लो समय निकै बह’स भएको छ । भारत र नेपालमा चाइल्ड पो ’र्नसँग सम्बन्धित जानकारी राख्न र बढवा दिन गैर का’नुनी हो । यदि तपाई गल्तीले चाइल्ड पो ’र्न सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि सा’वधान हुनुहोस् ।
२.औ’षधि किनबेच :
गुगल प्ले स्टोरमा धेरै यस्ता मोबाइल एप्प छन् जसबाट तपाई औषधि कि न्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईँले डाक्टरको प्रि’स्क्रिप्सन देखाउन अनिवार्य छ । यदि कुनै डाक्टरको स्वीकृतिविना नै औष’धि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई सम’स्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । अ.नुसन्धान एजेन्सीहरू ती मानिसहरूमाथि पनि मूल्याङ्कन गर्छन् । जसले गुगलबाट ओषधि किन्छन् ।
यस्तो कुनै जान’कारी गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् जसले अरूको आन्तरिक विषयमा सङ्केत गर्दछ । जस्तै (लोकेसन, अफिस र घर)को बारेमा सर्च नगर्नुहोस् । उदा’हरणको लागि तपाई गाउँको लोकेसन त सर्च गर्न स’क्नुहुन्छ तर प्रत्यक्ष एड्रेस हालेर गुगलमा सर्च गर्नु तपाईँका लागि खतरा हुनसक्छ ।
४.ब’ म बनाउने तरिका :
त्यस्तै कानुनले नि’षेध गरेका केही त्यस्ता कुराहरू पनि सर्च गर्नु हुँदैन । पटक–पटक सर्च गर्दा तपाई सम’स्यामा पर्न सक्नुहुन्छ । अ.नुसन्धान एजेन्सीहरू तपाई माथि मनिटर गरिरहेका हुन्छन् ।
५. अन’लाईन बैकिङ वेबसाइट
यदि तपाईलाई आफ्नो बैंकको वेबसाइट थाहा छ भने गुगलमा अनलाईन बैंकको युआरएल अर्थात वेभ एड्रेस सर्च नग’र्न सुझाव दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा स्क्यामर (इन्टरनेटमा ठ’गी गर्नेहरु) ले बैंकको जस्तै मिल्दोजुल्दो वेभ’साइट बनाएका हुन्छन् । यसको ठेगाना र लुक्समा केही मा’त्र फरक हुन्छ । कतिपय बेला यस्तो नक्कली साइटमा युजरहरुले आफ्ना संवेदनशील सूचना टाइट गर्छन् । त्यसबेला उनीहरु धो’काधडीको शिकार बन्ने गर्दछन् ।
६. कस्टमर केयर नम्बर
फ्रड र स्क्याम गर्नेहरुले गुगलमा कम्पनीहरुका नक्कली कस्टमर केयर नम्बर र वेब साइट देखाउने गर्दछन् । कतिपय घटनामा गुगलमा कस्टमर केयर नम्बर सर्च गरेपछि फोनमा युजर्सलाई यस्ता ठ’गहरुले ठगेका छन् । कुनै पनि कम्पनीको कस्टमर केयर नम्बर गुगलबाट खोज्नुको साटो सोझै उक्त कम्पनीको वे’ब पेजमा या फोनबाट कस्टमर केयरसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ ।
७. मोबाइल एप्स र सफ्टवेयर
यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनका लागि कुनै पनि एप्स वा सफ्टवेयर गुगलमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने यस्तो नगर्नुहोस् । सधैँ गुगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टो’रबाट मात्रै अपडेट गर्नुहोस् । गुगलमा सर्च गरेर भेटिने एप्सहरुमा मा’लवेयर अर्थात भाइरस हुन सक्छन् ।
८. फ्रि एन्टिभाइरस या सफ्टवेयर
इन्टरनेटका केही साइटहरुले आधिकारिक र सही प्रकारका यस्ता सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएका हुन्छन् । तर गुगलमा खोजेर कुनै पनि नचिनेको एन्टिभाइरस या सफ्टवेयर इन्स्टल नगर्नुहोला । कतिपय यस्ता सफ्टवेयर आफैमा भाइ’रस हुन सक्छन् । कतिपयले सिस्टमलाई ध्वस्त पार्न सक्छन् । सक्क’ली र नक्क’ली सफ्टवेयरमा फरक छुट्याउनु पनि कठिन काम हो । त्यसैले सतर्क रहनुहोला । जे स’मस्या हल गर्न सफ्टवेयर खोजिएको हो, त्यही स’मस्या बढाउने सफ्टवेयर कतिपयले राखेको देखिन्छ ।
९. डिस्काउण्ट कुपन को
यदि सपिङ साइट या ऐपमा तपाईंले डि’स्काउण्ड कुपन कोड पाइरहनु भएको छ भने त्यो राम्रो हो । तर यस्तो कोड खोज्न गुगलको सहायता लिनु घातक हु’न सक्छ । दर्जनौँ नक्कली साइटहरुमा तपाईंले यस्ता नक्कली कुपन कोडहरु पाइन सक्नु हुनेछ । यसबाट तपाईंको बैंकसम्बन्धी सम्पूर्ण जा’नकारी स्क्यामर कहाँ पुग्न सक्छ ।
केटिएम दैनि’कको सि’स्टर पव्लिकेशन इमेची डटकमको अर्काइभबाट
Previous उपचार गराउन हिँडेकी आमाको गाडीमै मृ त्यु, मृ`त आमाको काखमा सुतेको छोराको तस्बिरले सबैलाई रुवायो
Next कुलमान आएपछि प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय प्र’मुखहरु फेरिए